Nagu saabsan - FUJIAN YUANHUA bamka warshadaha CO., LTD
FUJIAN YUANHUA bamka warshadaha CO., LTD
Waxaan nahay istuudiyaha naqshadeynta oo aaminsan awoodda naqshadeynta weyn.
FUJIAN YUANHUA PUMP INDUSTRY CO., LTD oo laga aasaasay Fujian sanadkii 2009, oo ah shirkad gebi ahaanba iska leh shirkadda PEAKTOP Group ee ku qoran Hong Kong (Koodhka kaydka ee SEHK: HK0925). Kooxda PEAKTOP waxaa la aasaasey 1991, inta badan wax ka qabashada hadiyadaha iyo shaqada guriga.
Si kastaba ha noqotee imminka shirkad-YUANHUA waxay inta badan ku hawlan tahay cilmi-baarista iyo horumarinta, soo-saarka iyo iibinta tamarta wax-ku-oolka ah ee AC, bamka biyaha ee DC-ka, bamka aan biyaha lahayn ee DC-ka iwm. gawaarida, qalabka otomaatiga ah ee biyaha wareega, alaabada qoraxda (isha qubeyska shimbiraha), taangiyada kalluunka aquarium, qalabka qubeyska cagta, qaboojiyaha hawada. Intaa waxaa sii dheer waxaan ku darnaa badeecooyin cusub sida mashiinka qashinka lagu rido ee mashiinka dharka lagu dhaqo iyo RO pump oo lagu nadiifiyo biyaha.
Shirkaddayadu waxay heshay ISO9001: shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee 2008, oo si adag u raac nidaamka maamulkan. Badeecada waxaa ogolaaday CCC, ETL, UL, CUL, CE / GS, ROHS, SAA iwm Kuwaas oo buuxin kara baahida dalal badan oo adduunka ah. Waxaan la sameynay xiriir ganacsi oo muddo dheer soconaya qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee gudaha.
Waxaan u heynaa labo magac "PEAKTOP" iyo "YUANHUA" oo ah bambooyinkeena quusin kara. Ku dhowaad 20 sano oo khibrad ah iyo tayo aad u fiican, waxaan ku leenahay sumcad sare warshadaha. Waxaan sidoo kale ku qeexan nahay soo saaraha wax soosaarka matoorrada quusin kara inta badan silsiladaha waaweyn ee waaweyn. Had iyo jeer mabda'a ah "Tayada marka hore, Macaamiisha ayaa ugu horreysa", waxaan had iyo jeer ka helaynaa jawaab celinta ugu fiican iyo deynta dibadda iyo suuqa guriga.
Si aan si isdaba joog ah u horumarino suuqyo caalami ah oo cusub, waxaan kaqeyb galnay Carwada Canton sanad walba iyo mararka qaar Bandhigga Caalamiga ah ee Hong Kong Electronics Show. Keena badeecada cusub ee shirkada si ay fool ka fool ula xiriiraan macaamiisha cusub iyo kuwii hore ee dibada, dhagayso fikradaha iyo talooyinka macaamiisha, isla markaana si joogto ah u wanaajiso alaabada. Ku qanacsanaanta macaamilku waa ujeeddada adeeggayaga.
Intaa waxaa sii dheer, si loo kobciyo waqtiga firaaqada iyo daryeelka, shirkadeena waxay siisaa hadiyado dhalasho iyo xaflado munaasib ah dhalashada shaqaale kasta. Shirkadda Yuanhua waxay tagtaa meelaha loo dalxiis tago si ay u soo safarto 2-3 jeer sannad kasta. Kahor Iida Guga waxaa jira casho balaaran iyo bakhtiyaanasiib sanadkasta, sidoo kale waa munaasabad mahadnaq iyo jawaab celin sanadle ah oo lagu muujiyo dhamaan sanad xisaabeedka shaqaalaha shirkada.
Ku dhowaad 20 sano oo khibrad ah iyo tayo aad u fiican, waxaan ku leenahay sumcad sare warshadaha.
- Tayada marka hore, Macaamiisha marka hore